१२ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माएर झाडीमा फ्याँ’केपछि… – Classic Khabar
१२ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माएर झाडीमा फ्याँ’केपछि…
August 1, 2021 353
सुन्दैमा अपत्यारिलो तथा कहालीलाग्दो घटना चीनमा भएको छ । जसले मानवतालाई नै लज्जित बनाएको छ । यो मामिलामा कसलाई दोष दिने ? जवाफ दिन गाह्रो छ । चीनको यिबिन सहरमा एक १२ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माइन् अनि जन्माएको बच्चालाई झा’डीमा फ्याँ’किन् ।
ती १२ वर्षे बालिका असहाय थिइन् । उनलाई बाबु–आमाले छाडेका थिए । स्थानीय पुलिसका अनुसार बालिकाको त्यहीँ अवस्थाको कसैले फाइदा उठायो र उनलाई कर णी गरी गर्भवती बनायो । यसरी कर णी भएपछि गर्भ रहन्छ र बच्चा जन्मिन्छ भन्ने कुरा बालिकालाई थाहा थिएन, त्यसैले उनले आफुलाई कसैले कर णी गरेको कुरा कसैलाई भनिनन् ।
अन्ततः ५ कक्षामा पढ्ने ती बालिकाले बच्चा जन्माइन् र कसैलाई पनि नभनीकन झा’डीमा फ्याँ’किन् । तर केही मानिसले त्यो बच्चा देखे । बच्चालाई तत्कालै अस्पताल लगियो । पुलिसले बच्चाको आमाको खोजी गर्यो । अन्ततः ती १२ वर्षे बालिकाले बच्चा जन्माएको पत्ता लाग्यो ।
समाचार अनुसार, सहरका मानिसहरुले उक्त बच्चाको उपचारका लागि धनदान गरिरहेका छन् । आमा र बच्चा दुबै स्वस्थ भएसँगै उनीहरुलाई अनाथाश्रम पठाइनेछ । यी बालिका आमालाई कसले गर्भवती बनाएको हो भन्ने कुराको खोजी पुलिसले गरिरहेको जनाएको छ ।
स्मरण रहोस्, चीनमा झण्डै ९० लाख बालबालिकालाई उनका बुवाआमाले छाडेका छन् । बुवाआमा जागिरको खोजीमा अन्यत्र जाँदा बालबालिका असहाय हुने गरेका छन् । कतिपय बच्चालाई घरका अन्य सदस्यले पालेका हुन्छन् त कतिपय असहाय नै हुन्छन् । एजेन्सी
Prevहामीलाई मन्त्री बनाइदिनु भन्दै देउवालाई भेट्न बालुवाटार जाने माधव पक्षका ४ नेता को हुन् ?
Nextफेरी सङ्क्रमणकै कारण अस्ताए यी बरिष्ठ नेता श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या भएपछि अचानक निमोनिया बढेर निधन
‘संविधानको धारा जति पल्टाऊ फेरि पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री’